musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Thailand Bofu kune COVID-19 Surge: Pushes Phuket Sandbox
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
Phuket Sandbox mari inokosha kupfuura hutano
Kunyangwe kuwanda kwezviitiko zveCOVID-19 muThailand mose, mutauriri weCentre for Economic Situation Administration (CESA), Thanakorn Wangboonkongchana, ati nhasi kuti mushandirapamwe wePhuket Sandbox unofanirwa kuenderera pamwe nekugadziriswa kunogara kuchiitwa kugadzirisa matambudziko.
Phuket yakatengesa 335,000 hotera husiku husiku kwenguva yaChikunguru-Gunyana pasi pemushandirapamwe weSandbox.
Iyo yakazara mari inotarisirwa ndeye 8.9 bhiriyoni baht (US $ 265.9 mamirioni) panguva ino yemwedzi mitatu yenguva.
Iyo Phuket Sandbox kubva payakatanga yatoburitsa yakatenderedza bhiriyoni bhiriyoni (US $ 1 mamirioni).
Nharo ndeyekuti mushandirapamwe padanho razvino watove watobatsira kuburitsa mabasa, uku achigadzirira zvinokwezva zveyakajairika mwaka wevashanyi kusvika mukupera kwegore. Hurumende iri kudaidzira mhedzisiro yemushandirapamwe wePhuket Sandbox kuti ive yakanaka, kuenda kumberi kunovhurazve nyika kune vashanyi vakabaiwa nhomba, kutanga nedunhu rechitsuwa chePhuket.
VaWangboonkongchana vakati hurumende inotarisira kuti mushandirapamwe uchaona kuwedzera kwekuita muna Nyamavhuvhu naSeptember, nechinangwa chevashanyi chakatarwa kuvanhu zviuru zana muna Chikunguru-Gunyana, nemari inosvika mari inosvika mabhiriyoni 100,000 bhiriyoni (US $ 8.9 mamirioni) panguva imwecheteyo. Akadana vagari vemunharaunda kuti vagamuchire zvakanaka vashanyi, achivapa chimiro chakanaka vachiona kuchengetedzeka.
YekuThailand yekushanya kwekutyaira kuvhurazve mushandirapamwe Phuket Sandbox yakatoburitsa kwakatenderedza bhiriyoni bhiriyoni (US $ 1 mamirioni) mukuyerera kwemari kubvira payakavhurwa mwedzi wapfuura uye kusvika parizvino yakatambira vanenge 29.9 vanosvika kune dzimwe nyika, nepo 17,000 yekugara kwehotera husiku yakachengetwa panguva yaChikunguru -Gunyana.